Agbamakwụkwọ Agbamakwụkwọ n'oge COVID-19
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons » Agbamakwụkwọ Agbamakwụkwọ n'oge COVID-19
Njem azụmahịa • investments • News • Iwughachi • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Tourism • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ma enwere coronavirus na-agbasa gburugburu ụwa ma ọ bụ na ọ bụghị, agbamakwụkwọ ka na-adị n'etiti oge mgbe a bịara n'ịmekọrịta njikọ nke ịhụnanya. Nancy Barkley, onye nchoputa na onye nwe Honeymoons & Get-A-Ways, onye na-agba ọsọ ahụ Network Tourism Network (WTN) Otu Mmasị maka Mmemme Agbamakwụkwọ na njem Honeymoon, duziri mkparịta ụka na niche a nke bụ nnukwu azụmahịa n'agbanyeghị ihe na-eme n'ụwa.
Onye nhazi okwu Juergen Steinmetz kpọbatara Nancy kwuru, sị: “Ọ na-abụkarị naanị anyị lụrụ di na nwunye ka anyị lụrụ, yabụ, ọ bụ ihe pụrụ iche ma nwee nnukwu nlebara anya. Ndị dị ka Nancy maara ndị ziri ezi n'ụlọ ọrụ ahụ iji mesie ememme agbamakwụkwọ a na-agaghị echefu echefu. ”
Nancy mere ka a mata onwe ya, na-esite na Philadelphia, Pennsylvania, na-ekerịta na ya anọwo na ụlọ ọrụ nnabata maka afọ 25. Ọ bụ onye enyere ndụmọdụ agbamakwụkwọ na njem ezumike nke ezumike, yana ọ nọkwa na kọmitii nke International Wedding Wedding Planners Association. Ọ malitere azụmahịa ya na 2005 na agụụ maka agbamakwụkwọ njem njem.
Nancy kwuru, sị: “Eji m n’aka na anyị niile nwere akụkọ banyere afọ gara aga mgbe ọrịa a na-efe. Amaara m onwe m na enwere m ọtụtụ di na nwunye na-enwe mmekọrịta na alụm di na nwunye na nchekasị na mgbanwe na ịkagbu, mana achọghị m ịnọ na nke ahụ. Nke a bụ maka olile anya maka 2021 ma ga n'ihu. "
N’ịgbaso usoro nke mkparịta ụka okpokoro okpokoro, gee ntị n’ihe Nancy na ndị bịara ya ga-ekerịta gbasara agbamakwụkwọ na oge ezumike, malite na Marian Muro, Director General nke Barcelona Tourism Board.